रवि लामिछानेलाई फसाउन शालिकरामको भिडियो इडिट गर्नेलाई कडा कारवाही हुन्छ: प्रदीप ज्ञवालि
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गृहजिल्लामा गुल्मिमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले शनिबार संचारकर्मीशीत कुराकानी गर्दै समाजमा रहेका कुरालाई सत्यतथ्य ढंगबाट उजागर गर्न आग्रह समेत गरे।
मन्त्री ज्ञवालीले भने “तपाईँहरु बास्तबिकता बुझ्नेर खुलेर लेख्नुस्, लेख्न पाइन्छ । लेखेका सबै कुरा ठिक हुन भन्ने कुरा हुँदैन, तर लेख्न चाही स्वतन्त्र छ “स्वतन्त्र भए भन्दैमा अन्यावस्यक कुराहरु लेखेर समाजमा भ्रम फैलाउने काम कोही कसौबाट नहोस ।
मन्त्री ज्ञवालीले चितवन प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेका बारेमा सार्बजनिक भएको भिडियो आफुले पनि हेरेको बताए । मन्त्री ज्ञावलीले पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको भिडियो आफूले राम्रोसँग हेरेको छु भिडियोमा ‘केही कुराहरू एक-आपसमा बाझिएका पनि छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने “त्यो कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ, यी सबै कुराहरू छानबिनको दायरामा छ्न । कानुनभन्दा माथि कोही हुदैन दोषीले सजाय पाउनैपर्छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि रवि लामिछाने जीलाई सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएकाे हाे मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
त्यसो भए त्यो भिडियो इडिट गर्ने मान्छेलाई पनि सरकारले खोज्न पर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो– ‘खोज्छ, किन नखोज्ने ? उसलाई खोजेपछि थाह हुन्छ बदमासी गर्ने को हो भन्ने, सबै कुरा खुल्छ, निर्दोष मान्छे फस्ने कुरा हुँदैन दोषी भए कुनै पनि ओहदाको मान्छे भन्नु हुँदैन ।’ कानुन अनुसार चल्नुपर्छ ,पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।
Prevरविलामिछानेको केस हेर्ने एसपी मल्लबाट आयो यस्तो दुखद खबर: पुरै भिडियो हेर्नुहोस
Nextचितवन प्रशासनको कडा चेतावनी: रविको समर्थनमा होहल्ला गरेमा कारवाहि